Shiinaha Line Line Mashiinka Buuxinta Shaamboo Automatic iyo alaab-qeybiyeyaasha | Higee
Khadadka mashiinka buuxa ee dhalada ayaa ku habboon alaabada nafwaayay sare ee buuxinaya xirashada iyo calaamadeynta. Waxaan ku qalabeyn karnaa khadka oo dhan min feeder ilaa dhalada ururiyaha leh khadka wax soo saarka oo dhameystiran.
Khadka Tooska ah ee Mashiinka Mashiinka Mashiinka Shaambooga ah
Mashiinka waxaa loo isticmaalaa noocyada kala duwan ee dhalooyinka wareega iyo dhalada qaab aan caadi aheyn ee cuntada, farmashiyaha iyo warshadaha kiimikada, sida cadarka, saliida lagama maarmaanka ah, looshinka la isku qurxiyo, alaabada kiimikada iyo dareeraha afka iwm.
Mashiinkaani wuxuu iskuxirayaa quudinta dhalada otomaatigga ah, buuxinta, calaamadeynta mashiinka wax lagu dhejiyo iyo daabacadda jet jet iwm Waxay kuxirantahay inta mashiin ee macmiilku rabo inuu dalbado iyo awooda macmiilku ubaahanyahay.
● Hawlgalka is-dhexgalka nin-Ingiriisiga ah, ku habboon oo si fudud loo fahmi karo
Naqshadeynta toosan waxay fududeyneysaa in lala xiriiro mashiinno kale.
● Dhammaan qaybaha xiriir la leh walxaha waxay ka samaysan yihiin qalab bir bir ah oo tayo sare leh. La xiriirida walxaha waxay isticmaashaa SUS 316L Servo buuxinta.
Controller Soo dejiye kumbuyuutar la xakameyn karo oo la soo dejiyey + kontoroolka shaashadda taabashada ee la soo dejiyey, waxqabadka deggan iyo kalsoonida sare
Design Naqshadeynta biyuhu ee miiska dushiisa, oo sahlan in lagu nadiifiyo biyo.
Design Naqshadeynta qaab dhismeedka degdegga ah, oo si sahlan loo kala furfuro dhuumaha bamka ee peristaltic ah
Converter Beddelaha hiwaayadda ayaa hagaajiya xawaaraha si loo buuxiyo shuruudaha buuxinta ee alaabooyinka kala duwan.
Bottle Dhalo malahan shaqo buuxin ah, shaqeyn xisaabinta wax soo saar otomaatig ah
Ogaanshaha otomaatiga ah ee dareeraha sawirka korantada ee gudaha iyo dibedda, iswaafajinta otomaatiga ah ee mashiinka ficilka.
Hore: Khadka Mashiinka Buuxinta Awoodda Sare
Xiga: Khadka Tooska ah Nooca Mashiinka Buuxinta Kiimikada
Mashiinka Buuxinta Mintiga Dibnaha
Mashiinka Buuxinta Walxaha
Mashiinka Buuxinta Cadarka